काठमाडौं-१ का १०० मतदातासँग कुरा... :: चेतना गुरागाईं :: Setopati
काठमाडौं-१ का १०० मतदातासँग कुरा गर्दा प्रकाशमान र रवीन्द्र 'नेक टु नेक'
सेतोपाटी टिम काठमाडौं, कात्तिक २९
मंसिरमा चुनाव हुने १६५ क्षेत्रमध्ये काठमाडौं-१ यस्तो क्षेत्र हो, जुन पूरै महानगरभित्र पर्छ।
महानगरवासी भएकाले यहाँका मतदाता चलायमान छन्। चुनावी मुद्दा र विकासका आशासँगै प्रतिस्पर्धा पनि अन्यत्रभन्दा फरक छ।
देशका अधिकांश ठाउँमा वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धन निकट प्रतिस्पर्धी देखिए पनि परम्परागत रूपमा कांग्रेसको पकड मानिने यो क्षेत्रमा केही महिनाअघि मात्र बनेको विवेकशील साझाका उम्मेदवार बलिया प्रतिस्पर्धी बनेका छन्।
सेतोपाटीले काठमाडौं-१ का सय जना मतदातासँग कुरा गर्दा यहाँ कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र विवेकशील साझाका सहसंयोजक रवीन्द्र मिश्र 'नेक टु नेक' प्रतिस्पर्धामा छन्।
प्रकाशमानको पक्षमा परम्परागत भोट छ भने नयाँ र अरू दलप्रति आक्रोशको भोट रवीन्द्रको पक्षमा छ।
हामीले यो क्षेत्रका त्रिरपुरेश्वर, थापाथली, बुद्धनगर, थापागाउँ, बानेश्वर, शान्तिनगर, भिमसेनगोला पुगेर १०० जना मतदातासँग 'यो चुनावमा तपाईं कसलाई भोट दिनुहुन्छ?' भनेर सोधेका थियौं।
हामीले भेटेकामध्ये २९ जनाले आउने चुनावमा कांग्रेसलाई भोट हाल्ने बताए। यो कांग्रेसको परम्परागत मत हो।
'यसपालि अलि सजग छौं। तैपनि पार्टी छोड्नु भनेको घर छोड्नु बराबर हो। त्यही भएर अन्तिममा कांग्रेसलाई भोट हाल्छु,' एक मतदाताले भनिन्।
पुरानो पार्टी भएकाले जे जसो भए पनि कांग्रेसले नै देश विकास गर्छ भन्ठान्ने मतदाता धेरै छन्, जसलाई नयाँ पार्टीसँग राजनीतिक भिजन छ भन्नेमा शंका छ। 'सबैले आश्वासन दिन्छन्। नयाँ आएको पार्टीको पनि राजनीतिक भिजन छैन रे। त्यही भएर आफ्नै पार्टी कांग्रेसलाई भोट हाल्ने हो,' अर्का मतदाताले भने।
कांग्रेसलाई मत दिन्छु भन्नेहरूमध्ये एक जनाबाहेक सबै यस्ता मतदाता हुन् जसले यसअघि सधैं कांग्रेसलाई नै भोट हाल्दै आएका छन्।
२०७० मा एमालेलाई भोट दिएका ती एक मतदाता पनि यसपालि एमाले उम्मेदवार नभएकाले कांग्रेसलाई भोट दिने निर्णयमा पुगेका हुन्।
प्रकाशमानका पक्षमा एकातिर कांग्रेसको परम्परागत भोट छ भने अर्कातिर नेवार समुदायको जातीय भोट।
परम्परागत भोटकै कारण २०७० मा यो क्षेत्रमा प्रकाशमान भारी मतले विजयी भएका थिए। यहाँ दोस्रो, तेस्रो र चौथो भएका उम्मेदवारको मत जोड्दा समेत प्रकाशमान एक्लैको भन्दा ४ हजार कम हुन्छ।
वाम गठबन्धनपछि माओवादी भागमा परेको यो क्षेत्रमा हसिँया हथौडामा भोट हाल्न नसक्ने एमालेका केही भोट पनि प्रकाशमानको पक्षमा आउने देखिन्छ।
अघिल्लो संविधानसभामा यो क्षेत्रमा तेस्रो बढी मत ल्याएको तत्कालीन राप्रपा नेपालसँग अहिल कांग्रेसले चुनावी तालमेल गरेको छ। २०७० को चुनावमा राप्रपाले यहाँ ३७३२ मत ल्याएको थियो। 'यो क्षेत्रमा राप्रपाको पनि राम्रै भोट छ। अघिल्लो पालि मैले गाईमा भोट हालेको थिएँ, यसपालि रूखमा हाल्न सक्छु,' एक मतदाताले भने।
दुवै संविधानसभामा यो क्षेत्रबाट विजयी प्रकाशमानलाई यसपालि जित्न भने सहज छैन।
वैशाखको स्थानीय चुनावमा तत्कालीन विवेकशील र साझा पार्टीका मेयर उम्मेदवारले यो क्षेत्रका वडामा सबैभन्दा धेरै भोट पाएका थिए। यहाँबाट विवेकशीलकी रञ्जु दर्शना र साझाका किशोर थापाले पाएको मत ७ हजार ६ सय थियो भने कांग्रेस उम्मेदवार राजुराज जोशीका पक्षमा ६ हजार ८ सय मत थियो।
पार्टी एकीकरणपछि बनेको विवेकशील साझाले स्थानीय चुनावको भोट कायम राखेको देखिन्छ। स्थानीय चुनावमा बेग्लाबेग्लै लडेका यी दुई दलका उम्मेदवारले जितिहाल्लान् भन्ने धेरैलाई विश्वास थिएन। त्यो केवल विद्रोहको भोट थियो। यसपालि दुई पार्टी एक भएपछि मिश्रले जित्ने धेरैको आशा छ। भोट हाल्न मन भए पनि नजित्नेलाई के हाल्नु भन्नेहरू मिश्रको पक्षमा आउन सक्छन्।
'पढेलेखेका, जानेका बुझेका सबै हेरेर भोट हाल्ने हो। पुरानालाई जति दिए पनि केही गर्ने होइन रहेछ। त्यही भएर स्थानीय चुनावमा रञ्जुलाई दिएको हो। अब पनि तराजुलाई हाल्ने हो। नयाँलाई पालो दिनुपर्छ,' एक मतदाताले भनिन्।
हामीले कुराकानी गरेकामध्ये २७ जनाले यसपालि विवेकशील साझालाई मत दिने बताए।
नयाँ उम्मेदवार चाहने मतदाताका रोजाइमा रवीन्द्र मिश्र परेका छन्। तल्लो तहसम्म संगठन बन्न बाँकी भए पनि कुनै दलमा नलागेका तटस्थ मतदाता उनीप्रति आकर्षित छन्।
'हामीले विकल्प खोजेका हौं। जसलाई भोट दिए नि केही भएन। सबैले आफ्नो हितलाई मात्र ध्यान दिए। त्यही भएर विवेकशील साझालाई हेर्ने हो, यो एकपटक,' एक मतदाताले भने।
मिश्रलाई मत दिन्छु भन्ने २७ जनामध्ये ११ जनाले २०७० चुनावमा कांग्रेसलाई भोट हालेको बताए। २०७० को चुनावमा सिंहले १५१३८ मत ल्याएका थिए। दोस्रो भएकी माओवादी उम्मेदवार रेणु दाहालले ४ हजार ६४ मत पाएकी थिइन्।
कांग्रेसको सदस्यतासमेत लिएकी एक मतदाताले भनिन्, 'प्रकाशमानलाई दुईपटक जितायौं। भूकम्प गएको बेला एकपटक हामीलाई हेर्नसम्म आएनन्। अरू काम त परको कुरा। त्यही भएर यसपालि विवेकशील साझालाई दिने हो।'
वाम गठबन्धन बनेर यो क्षेत्रमा एमाले उम्मेदवार नहुँदा असन्तुष्ट केही मतदाता पनि रवीन्द्र मिश्रका पक्षमा जाने देखिन्छ।
अघिल्लो चुनावमा एमाले र माओवादीलाई भोट हालेका ४ मतदाताले यसपालि नयाँ पार्टी भएकाले विवेकशील साझालाई मत
'अनिल शर्मा हामीले चिनेकै छैनौं। गठबन्धनलाई त नहाल्ने हो। नयाँलाई काम गर्न दिनुपर्यो नि। त्यही भएर अब विवेकशील साझालाई विचार गर्नुपर्छ कि,' एक मतदाताले भने।
परम्परागत रूपमा कमजोर मानिएका एमाले र माओवादी उम्मेदवार शर्मा प्रतिस्पर्धामा अलि पछि छन्। हामीले कुरा गरेकामध्ये १५ जनाले वाम गठबन्धनलाई मत दिने बताए। एक मतदाताले भने, 'म त केपी ओलीले भने जे पनि गर्न तयार छु। हसियाँ हथौडामा भोट हाल्न त के भयो र! तर मेरी छोरीले नर्वेबाट फोन गरेर- बाबा, यसपालि विवेकशील साझालाई भोट दिनुपर्छ भनी। त्यसो भए तैं आएर दे भनेको छु।'
हामीले कुरा गरेका २९ मतदाताले अझै कसलाई मत दिने निधो गरिनसकेको बताए। अझै अनिर्णित यो मतले चुनावी नतिजामा भने निर्णायक भूमिका खेल्नेछ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक २९, २०७४, ०३:१५:०९